Booliska Soomaaliya oo ka hadley Qaraxyadii ka Dhacay Muqdisho . | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Booliska Soomaaliya oo ka hadley Qaraxyadii ka Dhacay Muqdisho .
Mudo hadda laga joogo in ka badan hal saac ayaa qarax loo adeegsaday gaari waxa uu ka dhacay afaafka hore ee Maqaayad ku taalla agagaarka Saldhiga degmada Waaberi ee Gobolkan Banaadir,waxaana qaraxaas faah faahin ka bixiyey taliska ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
Booliska Soomaaliya oo ka hadley Qaraxyadii ka Dhacay Muqdisho . was last modified: April 17th, 2019 by Ateera
Dhageyso:- Barnaamijka Xaaladaha Barakacayaasha.
Dibad-baxyada looga soo horjeedo Raisal wasaaraha Yahuuda oo sii xoogeysanaya